🥇 ▷ Taabasho loogu talagalay iPhone 5s Meelee farta kasta si aad u furto barnaamij kale ✅
Taabasho loogu talagalay iPhone 5s Meelee farta kasta si aad u furto barnaamij kale
Iyada oo la adeegsanayo taabashada “Touchy tweak” waxaan ka dhigi karnaa inta ugu badan ee suurtogalka ah in Taabo dareeraha ID-ga ee iPhone 5s cusub. Thanks to this, ka dib markii aan rakibnay, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan fududahay inaan furi karno codsiyada si fudud annagoo farahaaga ku shidanayn dareemahan.
Iyada oo la adeegsanayo Touchy loogu talagalay iPhone 5s waxaad u adeegsan kartaa taabashada (ID) taabashada ah ee iPhone 5s si aad ugu furto Barnaamijyada Farta kasta
Iyada oo la adeegsanayo Touchy waxaan fursad u yeelan doonnaa in aan isku aammusnaano illaa 5 dalab oo kala duwan (Apps) oo aan ku xiriirino mid kasta 5ta farood ee gacanta. Si loo habeeyo, mar ayaa la sheegay in tweak lagu rakibay iPhone-ka, waxaan fursad u yeelan doonnaa xulashada codsiyada ku xirnaan doona farta kasta iyadoo loo marayo menu cusub oo aan ka heli doonno:
Si loo furo arjiyadaha loo qoondeeyay, kaliya waxaan kaga tagaynaa farta ID Aqoonta, markey gartaan, dhowr ilbiriqsi ayuu arjiga furi doonaa, marka loo fiiriyo farta ay la xiriirtay.
Tweak Touchy Demo Video oo loogu talagalay iPhone 5s
Hoos waxaad ka arki kartaa muuqaal muuqaal ah oo muujinaya sida tweakkan loogu talagalay qaaska ah ee loo yaqaan ‘iPhone 5s’ iyo qalabka ‘ID ID’.
Habka Sirdoonka iyo Waxsoosaarka ee loo adeegsado taabashada ID
Sida aad ku arki karto fiidiyowga, tani waa hab caqli badan oo xitaa wax soo saar leh si loogu isticmaalo akhristaha faraha ee lagu soo daro iPhone 5s, habkan waxaan badbaadin doonaa waqti badan markii aan furinno codsiyadeenna inta badan la adeegsado.
Taabasho Waxaa laga heli karaa Cydia iyada oo la adeegsanayo kaydka ‘ModMyi’ ee qiimaha bilowga ah $ 1.99, qiimahan ayaa markaa isu beddali doona $ 2.99. Waxaan ku xasuusinaynaa in Touchy uu la jaan qaadayo iPhone 5s.
Haddii aad jeclaan lahayd taabashada “Touchy tweak” ee loogu talagalay iPhone 5s, ha ka labalabeynin u codee ama la wadaag iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada ee aad ugu jeceshahay (Twitter, Facebook, iwm.) badhamada waxaad ka heli doontaa kor.